Waa maxay sababta caymiska caafimaadka ee dhallintu u jaban yahay? | Ragga Caqliga leh
Nacho Cuesta | | nololeedka
Marar badan waxaan la yaabnaa da'da ay fiican tahay in la helo caymis caafimaad. Runtu waxay tahay inaysan jirin da 'go'an oo la sameeyo, laakiin waxay ku xirnaan doontaa nolosha shaqsiyeed ee mid walba. Laakiin waxa cad ayaa ah in sicirku saamayn doono. Ilaa heerkee ayay saamayn kartaa?
Da'du waa mid ka mid ah qodobbada ugu waaweyn ee lagu xisaabtamayo caymiska caafimaadka, maadaama ku salaysan da'da aad tahay, caymisku wuxuu noqon karaa mid qaali ah ama ka jaban. Waa kuwee kooxaha caymiska caafimaadku ka qaalisan karaa?
Qofka waayeelka ahi waa inuu bixiyaa ku dhowaad labanlaab ka badan tan qofka dhallinyarada ah loogu talagalay qandaraaska caymiska caafimaadka, iyadoon loo eegin inay tahay mid asaasi ah (badiyaa waxaa ku jira takhasusyo caafimaad oo yar ama baaritaanno aasaasi ah oo badan oo ah daawada aasaasiga ah ama takhaatiirta carruurta, tusaale ahaan) ama dhammaystiran (oo leh tiro badan oo takhasusyo caafimaad ah, isbitaal la dhigto dhowr maalmood iyo noocyo kala duwan sababaha ama helitaanka baaritaanno ka sii daran laamaha urology, cudurada dumarka, kansarka, iyo kuwo kale).
Tani waa mid ka mid ah gabagabada laga soo qaatay daraasad taas oo qiimayaasha kala duwan noocyada caymiska caafimaadka inta badan caymisyada Isbaanishka ee saddexda kooxood ee da'da (1960, 1980 iyo 2000).
Nooca caymiska Asaasiga ah complete Asaasiga ah complete Asaasiga ah complete
Sannad 1960 1960 1980 1980 2000 2000
Xigasho: waxaa diyaariyey Roams xog laga helay shirkado caymis oo kala duwan oo Isbaanish ah.
Markaa, qofka 60-jirka ah waa inuu bixiyaa qiyaastii € 653 / sanadkii caymiska aasaasiga ah, halka 20-sano jirka ah uu noqon doono € 393 / sanad. Marka laga hadlayo caymis buuxa, farqiga u dhexeeya 1.582 iyo 782 euro, siday u kala horreeyaan.
Tani waa sidaas maxaa yeelay aakhirka waxay u badan tahay taas qofka waayeelka ah wuxuu u baahan yahay inuu dhakhtar arko marar badan marka loo eego qofka ka yar. Sidaa darteed, qiimuhu waa ka qaalisan yahay kiiska koowaad marka loo eego kan labaad.
Waa run in ay jiri karaan xaalado gaar ah oo qofka ka yar u baahan yahay daryeel caafimaad oo dheeraad ah. Guud ahaan, shirkadaha caymiska ayaa sida caadiga ah sameeya xogwaraysi caafimaad oo ku saleysan qiimeynta qiimaha caymiska. Qaddarka ayaa noqon doona mid sarreeya ama ka hooseeya iyadoo ku xiran hadba heerka cudurka.
Sidaa darteed, xeerka guud ayaa ah in marka aad weynaato, ay ka badan tahay lacagta maaliyadeed ee aad bixin doonto. Laakiin haa, xaaladda caafimaad ee qof kasta ayaa waliba soo galaysa ciyaarta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Caymiska caafimaadka ee dhalinyarada wuxuu ku kacayaa kala bar dadka waayeelka ah
Jeansada Ragga Hoose